Peppertree By The Sea, i-Oceanfront Resort - 1 BR - I-Airbnb
Peppertree By The Sea, i-Oceanfront Resort - 1 BR
Ibekwe enhliziyweni yeNorth Myrtle Beach ngasogwini oluhle lwe-Atlantic, i-Peppertree By The Sea ihlinzeka izivakashi ngokufinyelela ogwini kanye nezinhlobonhlobo zezinsiza ezikhona njengechibi elishisayo elingaphakathi neJacuzzi, ichibi elingaphandle, igumbi lokuzilolonga, i-sauna, indawo yokupaka yamahhala kanye i-wifi. Uvakashela phakathi kuka-April no-September? Qiniseka ukuthi ufika eduze kwe-Tiki Hut yethu, lapho banikeza khona ukulunywa okusheshayo njengama-hot dog, ama-chips, neziphuzo. *Kufanele ube neminyaka okungenani engu-25 ukuze ungene.
Leli kamelo lokulala elilodwa linombhede omkhulu owodwa ekamelweni lokulala, usofa owodwa wokulala we-queen kanye negumbi lokugezela elilodwa eliphelele. I-condo nayo, ihlanganisa ikhishi elinakho konke elinemishini emikhulu futhi lingathatha izivakashi ezine. Leli yunithi lilungele abantu abashadile noma umndeni omncane. (Khetha amakamelo anama-balcony angasese nokubukwa kolwandle.)
* I-resort inikeza i-condo ngesikhathi sokungena ngakho-ke, ukubuka kwakho nesakhiwo sekhishi kungahluka. Amanye amayunithi abonakala emgwaqweni noma ukubukeka okuvinjelwe kolwandle kuye ngendawo yaphansi i-condo ekuyo. I-resort yenza konke okusemandleni ukukutholela ukubuka ulwandle noma kunjalo, ukubuka kuncike ekutholakaleni.
4.52 · 25 okushiwo abanye
IPeppertree by the Sea itholakala ogwini lolwandle eNorth Myrtle Beach. Le ndawo ithule kancane kuneMyrtle Beach futhi isasondele ngokwanele ezindaweni eziningi zokudlela nezihehayo. Izindawo zokudlela ezihamba ibanga lokuhamba zifaka, iBuoy's on the Boulevard, Harold's on the Ocean okungamabhulokhi ambalwa nje enyakatho. Eduze, kunendawo yegumbi lokubalekela ebizwa ngokuthi, i-Breakout Myrtle Beach, i-Sky Bar, i-King's at the Beach (isitolo sezikhumbuzo) kanye ne-Flynn's Irish Tavern. Izinkundla zegalofu ezincane nezegalofu azikude. Phezulu i-Coconut's Tiki Bar isolwandle. I-Barefoot Landing iqhele ngamamayela angu-4.5 futhi ihlala iyisikhathi esihle. Uma ufuna indawo yokwenza iwayini, hlola i-Duplin Winery engaphambi nje kwe-Barefoot Landing.
Ideski elingaphambili lizokwazi ukukuhlola futhi likwazi ukubhekana nezidingo zakho, ukulungiswa, njll. Sicela usebenzise ucingo olunikezwe ekamelweni lakho ukubashayela uma kukhona okudingayo. Futhi, ngizophinde ngitholakale ngohlelo lwemiyalezo lwe-Airbnb noma ngocingo uma uneminye imibuzo.
Sicela uqaphele: Noma yikuphi ukuvalwa kwezinsiza ezingalindelekile phakathi nokuvakasha kwakho kungaphezu kwamandla ami futhi ngiyaxolisa kakhulu ngokuphazamiseka uma lokhu kwenzeka.
Ideski elingaphambili lizokwazi ukukuhlola futhi likwazi ukubhekana nezidingo zakho, ukulungiswa, njll. Sicela usebenzise ucingo olunikezwe ekamelweni lakho ukubashayela uma kukhon…